ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဗဇ်စ်များ | တိုယိုတာဗဇစ်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Red Toyota Vitz 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Pearl White Toyota Vitz 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl white Toyota Vitz 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Silver Toyota Vitz 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Silver Toyota Vitz 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Blue Toyota Vitz 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်းေ...
Blue Toyota Vitz 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Brown Toyota Vitz 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည...
Black Toyota Vitz 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည...
Pearl White Toyota Vitz 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Black Toyota Vitz 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Light blue Toyota Vitz 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Pearl White Toyota Vitz 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
blue Toyota Vitz 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Silver Toyota Vitz 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်...
White Toyota Vitz 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်း...
Pearl White Toyota Vitz 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Toyota Vitz 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Vitz 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Silver Toyota Vitz 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 130 ငွေရှင်းမှုဖြင့်သာ
Pearl White Toyota Vitz 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl white Toyota Vitz 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
ပြည်တွင်း တိုယိုတာ ကားအသေးတွေထဲကဗစ်ဇ်များ
တိုယိုတာ ဗစ်တွေဟာ ဟတ်ဘတ် နောက်ဖုံး အပါအ၀င် တံခါး (၅) ပေါက်ကားထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ၁၉၉၈ ကတည်းက တိုယိုတာ ကုမ္ပဏီက စတင်ထုတ်ဝေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ထိတော့ မျိုးဆက် (၃) ဆက်တောင် ရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ တိုယိုတာ ရာရစ်လို့ သိကြပါတယ်။ ပထမ မျိုးဆက်မှာတင် နိုင်ငံ ၇၀ ကျော်မှာ ၃ သန်းကျော်လောက် ရောင်းအားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ဟာ ဂျပန်မှာထက်တောင် ပိုမိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်း တိုယိုတာ ဗစ်တွေကို အိမ်စီးကားတွေ အဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး တစ်ချို့ဆို တက္ကစီးတွေ အဖြစ် ဆွဲနေကြပါတယ်။ အရင်နဲ့ လက်ရှိမှာရိူးရွန်တော်တော်များများက ပြည်တွင်း ၀ယ်လိုအားတစ်ခု အတွက် မှာယူ ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်တွေမှာ အနည်းငယ် လုံးတဲ့ ပုံစံ ရှိပြီ့း  ပုံစံအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်မှာ ဒုတိယမျိုးဆက်မှာ ၁၀၀၀ စီစီကနေ ၁၈၀၀ စီစီထိတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၁၄၀၀ စီစီမှာ ဒီဇယ်ရရှိပါတယ်။ ဒီဇယ် ဆိုရင် မန်နျူးယယ်ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပြီး မန်နျူးယယ် ဂီယာ ၆ ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်မှာတော့ ၁၀၀၀စီစီကနေ ၁၅၀၀ စီစီထိ ရရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ အော်တို၊ ဓာတ်ဆီကားတွေကို အသုံးများကြပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ဗစ်ဇ်တွေကို ရာရစ်လို့ခေါ်ပြီး အရင် တံခါး (၃) ပေါက်ရှိတဲ့ ဗစ်ဇ်ကိုမှာ တိုယိုတာ ဘယ်တာ ဆီဒန်ကို နှစ်ခုပေါင်းပြီး ရာရစ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ရာရစ်တွေမှာ ၁၅၀၀ စီစီအင်ဂျင်တွေဟာ မြင်းကောင်ရေအား ၁၀၆ ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အော်တို၊ မန်နျူးယယ် ဂီယာတွေနဲ့ သွားပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများ အနေနဲ့ နောက်သုတ်၊အသံ စနစ် ကတ်ဆက်ရေဒီယိုများ၊စီဒီ ပလေယာနဲ့ တီဗီတွေ ပါရှိပါတယ်။ တီဗီမှာ Touch စကရင်၊ USB ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ( အိုင်ပေါ့တွေ အတွက်) ပါဝင်ပါတယ်။
မန်နျူးယယ် ဂီယာမှာ တစ်ဂါလံကို ၂၉ မိုင်ပြေးပြီး မြို့ပြင်ကတော့ ၃၆ မိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ လေအိတ်နှစ်အိတ်ကတော့ ပုံမှန်ရိုးရိုး မော်ဒယ်တွေမှာ လာပြီး ဘေးလေအိတ်တွေကတော့ ရွေးချယ်စရာတစ်ခု အနေနဲ့ တည်ရှိပါတယ်။
ဟွန်ဒါ ဖက်စ်တို့လို့ သေးငယ်တဲ့ ဟတ်ဘတ်လေးတွေ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမျိုးဆက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ တွေမှာ ကားပုံစံ အနည်းငယ် လုံးဝန်းပါတယ်။ ကားအတွင်းဖက်မှာ တိုယိုတာ ဘယ်တာနဲ့တူပြီး အတွင်းမှာ လူချောင်ချောင်ချိချိ ထိုင်နိုင်အောင်စီမံပေးထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကားတွေကတော့ မီးလုံးတွေ ပြောင်းသွားပြီး ဒီဇိုင်း ပိုပြီး ဆန်းလာပါတယ်။ ရှေ့ရှဲတွေနဲ့ ဘောနက်ရှေ့ ဇကာပေါက်တွေလည်း အနည်းငယ် လုံးရာကနေ ချွန်တက်သွားပါတယ်။ နောက်မီးတွေလည်း အနည်းငယ်လုံးရာက နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်တွေမှာ ချွန်ပြီး ဆဠဂံပုံစံ ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်မှန်အပေါ်က နောက်မီးတွေပါ ပါရှိလာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ပြည်တွင်းမှာ အသစ်တွေကို ၀ယ်ယူမှု မတွေ့ရပဲ ။ လေလံထဲကပဲ ကားအသန့်တွေကို ရှာဖွေကြပြီး ကျပ်သိန်း ၉၀ကနေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကိုမှ ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၀၉ ထိကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ကိုမှာ အများဆုံး ၁၃၅ သိန်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
တိုယိုတာ ဗစ်ဇ်တွေဟာ ၁၃၀၀ စီစီကားတွေ ဖြစ်ပြီး အိမ်စီးနဲ့ တက္ကစီကားများ အဖြစ်သုံးနိုင်တဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ လူကြိုက်များပါတယ်။ လူ(၅) ယောက်စီးဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်ပြေစွာ သုံးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။